अख्तिायारको उद्देश्यलाई बोकेको चलचित्र ‘सयकडा दश’ : प्रमुख आयुक्त « Naya Page
अख्तिायारको उद्देश्यलाई बोकेको चलचित्र ‘सयकडा दश’ : प्रमुख आयुक्त
प्रकाशित मिति :6February, 2019 5:52 pm
ललितपुर,२३ माघ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले चलचित्र ‘सयकडा दश’लाई अख्तिायारको उद्देश्यलाई बोकेको चलचित्र बताएका छन् ।
आयुक्तले मंगलबार ललितपुरको पुलचोक स्थित क्युएफएक्स हलमा दर्शक माझ बसेर चलचित्र हेरेपछि ‘अख्तिायारको उद्देश्यलाई बोकेको चलचित्र’ भनेका हुन् ।
उनले भने ‘चलचित्र सन्देश मुलक छ । म आशा विश्वास र अपेक्ष पनि के गर्छु भने यो चलचित्र हरेक नेपालीले हेर्नुपर्ने चलचित्र बनेको छ’, उनले अगाडि भने ‘अख्तियारको मुल मर्मलाई नै बोकेर चलचित्र बनेको लाग्यो मलाई । भ्रष्टाचारका विषयमा मैले बारम्बार भन्ने गरेको कुरा मौन रहनु पनि छन् ठूलो भ्रष्टाचार हो । त्यो मौनतालाई चिर्नेकाम यो चलचित्रले गरेको छ ।’
चलचित्रलाई अख्तियार प्रमुख आयक्तसहित आयुक्त डा. सावित्री गुरुङ, विदुषी सपना मातालगायत बिभिन्न व्यक्तित्वहरुले हरेका थिए ।
आयुक्त डा. सावित्री गुरुङले हसाउदै रमाइलो गराउदै महत्वपूर्ण संदेश दिएकोले निर्माण पक्ष र कलाकारलाई धन्यबाद दिइन । साथसाथै यो चलचित्र कुनै बर्ग बिशेषको लागि मात्र नभएर आम नेपालीले हेर्नु पर्नेमा जोड दिइन ।
यही माहोलमा ‘सयकडा दश’ हेर्न आफ्ना भक्तजनहरु सहित आएकी विदुषी सपना माताले चलचित्र अत्यन्तै मार्मिक भएको भएको भन्दै सबैलाई नछुटाउन अनुरोध गरिन ।
बेलुका ६ बजेको शो मा पनि दर्शकहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको र अधिकांस दर्शकले राम्रो चलचित्र भनी प्रतिक्रिया दिएका थिए । सबैले चलचित्र सन्देश मुलकसहित मनोरञ्जनले भरपूर्ण रहेको भन्दै उक्त चलचित्र एकपटक हेर्नैपर्ने सुझाए । उनिहरुले ‘यसको सन्देश प्रभावशाली मात्रै छैन, सरकारलाई घच्घचाउने खालको समेत छ’ भनेका थिए ।
शुक्रबार रिलिज भएको रामशरण पाठक निर्दे्शित चलचित्रमा मनोज गजुरेल, राजाराम पौडेल, अमृत ढुंगाना, करुणा श्रेष्ठ, उत्सव न्यौपाने, अमित पोखरेल, रवि डंगोल, रश्मी भट्टलगायतको अभिनय रहेको छ । चलचित्र राम्रो व्यापार गरिरहेको निर्माणपक्षले जनाएको छ ।
रज्जु प्रधान, उत्तम खत्री, डीआर उपाध्याय, संजीव न्यौपानेले दर्शन नेपाल क्रिएसनको ब्यानरमा चलचित्र निर्माण गरेका हुन् । चलचित्रका रामेश्वर कार्की छायांकार हुन् । बनिष शाह र भुपेन्द्र अधिकारीको सम्पादन रहेको चलचित्रमा रज्जु प्रधानको कथा छ । हास्यकलाकार राजाराम पौडेल चलचित्रको कार्यकारी निर्मातामा रहेका छन् ।
विवाह बन्धनमा बाँधिएकै मितिमा नायक आर्यन सिग्देललाई पुत्र लाभ
काठमाडौं, ६ वैशाख । चकलेटी नायक भनेर चिनिने आर्यन सिग्देललाई पुत्र लाभ भएको छ ।
‘पसिना’ मा गौरव शिक्षक, अनु पत्रकार (हेर्नुस् ट्रेलर)
काठमाडौं, ५ बैसाख । यही बैशाख २७ गतेबाट देशभर प्रदर्शनमा आउन लागेको मजदुरहरुको कथाव्यथामा निर्मित
आर्यन-नीता बलिउड फिल्ममा, यस्तो बन्यो ट्रेलर (हेर्नुस् भिडियो)
काठमाडौं, ४ बैसाख । नेपाली अभिनेता आर्यन अधिकारी र अभिनेत्री नीता ढुंगानाको लिड रोल रहेको